အင်္ဂလိပ်စာကဏ္ဍ | Danya Wadi
By danyawadi January 5, 2016 Leaveacomment
By danyawadi October 13, 2015 Leaveacomment
Chilly,chilli – ငရုတ်သီး Onion – ကြက်သွန်နီ Garlic – ကြက်သွန်ဖြူ Rabbit green; water green – ကန်စွန်းရွက် Roselle; sour green – ချဉ်ပေါင်ရွက် Salad; garden lettuce – ဆလပ်ရွက် Bean – ပဲသီး Gourd; calabash – ဗူးသီး Cucumber – သခွားသီး Golden pumpkin/yellow pumpkin – ရွှေဖရုံသီး White pumpkin – ကျောက်ဖရုံသီး Brinjal(egg plant) – ခရမ်းသီး Lady’s finger – ရုံးပတီသီး Cauliflower – ပန်းဂေါ်ဖီ၊ […]
By danyawadi September 26, 2015 Leaveacomment
အချစ် – Love မေတ္တာ -Affection မေတ္တာတု၊ မေတ္တာရောင် – Affectation ချစ်သူ – Lover မြတ်နိုးသူ – Adorer , Admirer ချစ်သူ ရည်းစား – Sweet heart, Girl friend , Boy friend, ချစ်မူ့ရေးရာ ကိစ္စ – Love affair အချစ်အထိမ်းအမှတ် ပစ္စည်း – Love token ဖူးစားရေးနတ် – Cupid ကြင်ယာ ( ခင်ပွန်း ၊ ဇနီး ) – Spouse လင် ( သို့မဟုတ် ) မယား – Better […]
ရာသီဥတုနဲ့ဆိုင်သော စကားလုံးများ ( Weather )
By danyawadi September 19, 2015 Leaveacomment
မိုးလေ၀သ ခန့်မှန်းချက် – Weather forecast အမြဲတည်ရှိသောလေ – Air လှုတ်ရှားတိုက်ခတ်သောလေ – Wind လေရဟတ် – Wind vane ကမ္ဘာ့လေထု – Planetary တိုက်မြဲလေ – Prevailing wind မုတ်သုန်လေ – Monsoon wind လေတိုက်နှုံးအား – Wind force စွတ်စိုသောလေ – Wet air ၀န်ရိုးစွန်းလေ – Polar wind ကုန်သည်လေ – Trade wind စို့ထိုင်းသောလေ – Humid air အရှေ့လေ – East wind အနောက်လေ – West wind တောင်လေ […]
Peter Ladefoged: Vowel Sound
By danyawadi May 29, 2015 Leaveacomment
1. Sounds and languages -The IPA chart sounds 2. Pitch and loudness 3. Vowel contrasts 4. The sounds of vowels 6. The sounds of consonants 7. Acoustic components of speech 8. Talking computers 10. How we listen to speech 12. Making English vowels 13. Actions of the larynx 14. Consonants around the world 15. Vowels […]